O-R350 sebeholwa eBoxer nasePick n Pay – Sivubela intuthuko Newspaper
ESITHOMBENI: I-BOXER ngesinye sezitolo esesiholela uR350 nePick n Pay.
I-SOUTH African Social Security Agency (Sassa) yethule uhlelo olusha lokulekelela abantu abathola isibonelelo sesikhashana sikaR350 ngokuya ezitolo ezimbili ezinkulu kuleli okuyiBoxer nePick n Pay ukuphungula isiminyaminya sokuya eposini.
Nazo lezi zitolo nezikhulu zazo zikuqinisekile ukuthi ngempela abantu sebengakwazi ukuza ezitolo zabo bazokwamukela imali yabo.
Laba bezitolo banxuse abantu ukuthi beze kuzona ukuzokwamukela imali yabo uma sebethole umqhafazo (SMS) emafonini abo obayalelayo ukukwenza lokho. Abalezi zitolo bazincoma ngokuthenjwa ngokunikezwa lo msebenzi ukuze kuphele ukumbondelana emaposini.
UMnu John Bradshaw oyisikhulu esibheke ukusebenza ekwasePick n Pay uthe: “Sizizwa sithobekile ngokuba ngabanye abanikezwe umsebenzi wokulekelela abantu ekutholeni ngokushesha imali yabo. Lokhu kuzokwehlisa imigqa emide eba semaposini lapho abantu bebuthanela ngobuningi babo beyofuna le mali abanye bagcine bengayitholanga,” usho kanje.
Abase-Sassa banxuse abantu ukuba bangalinge baye kulezitolo bengabiziwe ngemiqhafazo. Bathi lowo osebeziwe kumele aqikelele ukubheka ukuthi yiluphi usuku okumele ayolanda ngalo imali yakhe. Uma umuntu eseyolanda imali yakhe kumele aphathe umazisi (ID) nocingo lwakhe lolo okungene kulona umqhafazo ukuze kusheshe ukusizakala kwakhe. Kuthiwe kumele bazi ukuthi lezi zitolo akusizona eziphasisa abantu ukuthola imali kodwa nazo zikwenza lokho ngokulandela imiqhafazo ezongena ezingcingweni zabantu. Kunxuswa abantu ukuba bangayi ukuyobheka imali yabo eBP Pick n Pay Express, ePick n Pay Clothing nasePick n Pay liquor ngoba zona kazigunyaziwe ukukhipha le mali ngaphandle kwalezo ezidayisa ukudla kuphela.